Ayyaanni Irreecha Birraa Bishooftuutti Haala Hoo’aan Kabajamaa Jira – Oromedia
Home » Oduu » Ayyaanni Irreecha Birraa Bishooftuutti Haala Hoo’aan Kabajamaa Jira
(Oromedia, 30 Fulbaana 2018) Ayyaanni Irreechaa guddichi Oromiyaa, magaalaa Bushooftuutti sirna hoo’aa fi miidhagaan gaggeeffamaa jira. Ayyaana kana irratti ummanni miliyoonaan lakkaayamu Oromiyaa keessaa fi alaan qooda fudhachaa akka jiran hubatameera.
Oromoon miliyoonaan lakkaa’aman guutummaa biyyattii keessaa fi biyya alaarraa gama Bishooftuu Hora Arsadiitti bahanii Ayyaana Irreechaa kan bara 2018 kabajaa jiru.
Akka gabaasaan keenay ibsetti, ummanni hedduun ganama barii irraa eegalee Abbaa Malkaan durfamuun Abbootiin Gadaa, maanguddoonni, hayyootni, shamarraaniifi dargaggoonni waliin gama Hora Arsadiitti walga’uutti jiran.
Kana malees, sabaafi sablamoonni Itoophiyaa kibbaa kan Sidaamaa, Gaamoo, Alaabaa fi kanneen biroo uummata Oromoo waliin irreeffachuudhaaf guyyaa jala bultii irraa eegalanii Bishootuu galaa jiran.
Irreechaa: Ayyaana Guddaa
Ayyaanni Irreechaa birraa kun ayyaana Oromoo isa guddaa kan waggaatti altokko ummata Oromoo miliyoona hedduu bakka tokkotti fiduu dha. Ayyaanni kun yeroo ganna keessaa gara birraatti ce’uuf kabajamu waan ta’eef ummata Oromoo biratti haala addaatiin kabajama.
Keessattuu bara kana ayyaanicha waanti adda godhu, injifannoo ummatni Oromoo galmeeffatee dha. Kunis, yeroo qabsoon Oromoo kan Bilisummaa fi Nagaa sadarkaa olaanaatti injifannoo galmeessaa jiu keessatti kabajamaa jiraachuu dha.
Adda Bilisummaa Oromoo dabalateeqabsaa’onni Oromoo hedduun yeroo biyyatti deebi’an keessatti akbajamaa waan jiruuf seenaa keessatti haala addaatiin yaadatama. Guyyaan seena qabeessi kun akka dhufuuf, Irreechaa irratti otuu hin hafiin, gootonni Oromoo hedduun wareegama baasaa dhufan.
Sirna akkaan miidhagaa kana irratti ummanni ollaa Oromiyaa kan akka Gaamoo, Burjii fi Sidaamaa fa’aas akkuma aadaa isaaniitti miidhaganii qooda fudhachaa jiru.
Akaakuu Irreecha lamaa– kan tulluufi kan malkaa keessaa kan ammaa kun Irreecha Malkaa yeroo baayyee guutummaa addunyaatti waqtii Birraa kabajamuu dha.
Qulqullinaa fi Miidhagina
Guyyaan Ayyaana Irreechaa kana waanti adda godhu hedduu dha. Guyyaa kana namuu uffata aadaan faayamananii faaruufi sagalee galataa dhageessisaa sirnaan walgurmeessanii gama Hora Arsadiitti yaa’an. Ummanni Oromoo ayyaanicha irratti argamn uffannaa qofaan miti kan miidhaginni Irreechaa irratti argaman.
Akka aadaa fi duudhaa Irreechaa tti guyyaa kana namuu keessoo isaattis miidhagee argamuu waan qabuuf namni wallole illee arrarameetu Irreechaa dhaqa.
“Irreechaan araraa fi nagaa waan ta’eef, ardaa sanatti argamuufis namuu dursa waliif dhiisuun dirqama ta’a,”jedhu Ob Soriin Dhugaa.
Ayyana kana irratti namuu nagaa eeguuf dirqama qaba. Addatti immoo Foolleen dirqama addaa qaban. Akka Abbootiin Gadaa himanitti, Ayyaana Irreechaa barana irratti Foolleen Gadaa kuma tokko ta’an leenjiin kennameef nagaa eegsisuuf bobba’anii jiru.
Dhaamsa: Baga Ittiin Isin Gahe
Ayyaana kana ilaalchisuun qaamonni hawaasaa fi abbootiin aangawaa ergaa gammachuu dababrsaa jiran.
Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf Ministeerri Muummee Itoophiyaa, Abiy Ahmad, ergaa gammachuu ummata Oromoof dabarsanii jiran.
Dr Abiy ergaa isanii keessatti “Irreechi Duudhaan dhaloota Oromummaa Gadaan biqilee guyyaa nageenya itti labsatee, dhaloota isaa qe’ee eeguun sirna tumatee gootummaa isaan fakkeeffatu Oromummaadhaaf guyyaa addaati, jedhan.
‘‘Gaafa nuti tokkoomuu dhabnee duudhaa keenya ganne wal qoqqoonnee badiif wal kennine, qabsoo dhiigaan dhufteef kabajaa kennu dhabuu ta’a. Kanaafuu tokkummaa keenya eeggachuun icitii injifannoo keenyaa ta’ee itti fufuu qaba.’’ Irreechi jaalalaa baranaas carraa tokkummaa keenya duudhaa aadaa keenyaan faayoomnee dhaamsa abbootii Gadaa qalbiin itti dhaggeeffannu nuuf ta’a jennee abdannas jedhaniiru.”
Akkasumas Pirezidaantiin mootummaa Oromiyaa, ob Lammaa Magarsaa ummata Oromoo hundaaf dhaamsa dabarsaniin “ayyaana Irreechaa ummata Oromoo biratti iddoo addaa qabu kanaaf baga geessan,” jedhaniiru.
Ayyaana Irreechaa bara kana kabajnu bifa qindaawaafi bifa dinqisiifannaa qabuun ummanni hundi abbootiin Gadaa, qeeroofi qarreen hundi bifa Aadaasaa calaqqisuun ta’uu akka qabu Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dooktara Kabajaa Lammaa Magarsaa ibsaniiru.
Ayyaanni Irreechaa bara darbe karaa qindoomina qabuu fi rakkoo nageenyaa tokko male kabajamuusaa himuun bara kanaas kan bara darbe caalaa bifa nagayaafi tasgabbii qabuun akkasumas Aadaa keenya Addunyaaf karaa beeksiisuun ta’uu qaba.
Ayyaanni Irreechaa calanqee Sirna Gadaa kan ta’eefi Irreechas akkuma Sirna Gadaa galmee dhaabbataa UNESCO irratti galmeessisuuf hojjetamaa akka jiru kan ibsan kabajamoo Pireezidaantiin namni ayyaanasaa kabajuuf bahu hundi asxaa, alaabaafi sirboota siyaasa calaqqisan irraa of qusachuun ta’uu qaba jedhaiiru.
Mootummaan Ayyaanni Irreechaa karaa nagayaan akka xumuramu Gumii Abbootii Gadaa waliin qindoominaan hojjechaa akka jiruufi foolleewwaniifi qeerroowwan leenjisuun qophaa’aniiru. Rakkoon fayyaa quunnamuu maluufis gamanumaa ogeeyyiin fayyaa qophaa’aniiru.
Ummannis foolleefi qeerroo waliin ta’uun wal dubbisuun ayyaanasaa nagayaan bifa aadaasaa ummata addunyaaf calaqqisuun ta’uu akka qabu kabajamoo Pireezidaantiin dhaaman.
Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin Ayyaana Irreechaa ilaachisee Ibsa gabaabaa dabarseen didhaalee ummanni Oromoo keessa darbe yaadachiise.
“baroota kurnan dabran keessatti ummanni keenya dhawaataan aadaa isaa hordofuun Irreecha kabajachaa turuun ni yaadatama,”kan jedhe ABOn, “fedhii siyaasaaf jacha jeequmsaa fi miidhamni suukaneessaan ilmaan Oromoo irra gahe gaddaan yaadanna,”jedhe
Irreechi baranaa kan gammachuu fi badhaadhinaa akkasumas kan akkuma aadaa isaatti sirnaan kabajamu akka tahus ABOn hawwii isaa ibse. Itti dabaluunis, “milkoomina isaafis gama keenyaan qooda nurraa eeggamu ni kennina,”jechuun abdachiiseera.
Advocacy for Oromian gama isaatiin”ummatni Oromoo marti baga Ayyaana Irreechaa geessan” jechuun ergaa gammachuu dabarse.
“Barri kun bara milkii fi injifannoo ti,” kan jedhe Advocacy for Oromian, ummanni Oromoo akkuma kanana duraatti tokkummaa isaanii jabeeffatanii inijifannoo olaanaaf akka hojjatan dhaamsa dabarsee jira.
“Irreechaan mallattoo jaalalaa fi araaraa waan ta’ee, dhaloonni keenya guyyaa kan jaalalaa fi araaraan dabarsuun akka aadaan Oromoo gaarii kun guddatu haa goonu” jedheera.
Previous: እሬቻ—የምስጋና፣ የእርቅ፣ የአንድነት፣ የሠላም እና የደስታ ቀን!
Next: የእሬቻ በዓል በቢሾፍቱ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ